दलविहीन भइसकेको महन्थ ठाकुर पक्षको उद्धार गरिदियौं : उपेन्द्र यादव
११ भदौ, जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलविहीन भइसकेको महन्थ ठाकुर पक्षको आफूहरुले उद्धार गरेको बताएका छन् । प्रतिगामीको मतियार बनेर दलदलमा फसेपछि महन्थ ठाकुर पक्षलाई आफूहरुले उद्धार गर्न लगाएको उनको भनाइ छ । जसपाद्वारा शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘दलदलमा आफैं फसेपछि उद्धार गर्नेबारे सोच्यौं, […]
महन्थ ठाकुरको विश्लेषण : उपेन्द्र यादव सरकारमा जाँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बाट पाखा लागेको महन्थ ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाभित्र चाँडै कलह बढ्ने आकलन गरेको छ । जसपामा अन्तरविरोध बढ्यो भने आफ्ना लागि अनुकुल परिस्थिति निर्माण हुने समयको प्रतीक्षामा छन् महन्थ ठाकुर ।जसपाले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको तर सरकारमा मन्त्रीहरु पठाउनेबित्तिकै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आफूहरुलाई हुने महन्थ पक्षको ठहर छ ।पार्टीको आधिकारिकता पाउन असफल भएपछि ठाकुर पक्षले तत्काल राजनीतिकरुपमा खुम्चिएरै भए पनि जसपाभित्रै रह
उपेन्द्र यादव सरकारमा जाँदै, महन्थ ठाकुर मधेश दौडाहामा
साउन २३, काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता खोसिदिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्ष अहिले मधेसका बिभिन्न जिल्लामा पार्टीको बिस्तारित बैठकमा जुटेको छ । यता पार्टीको आधिकारिकता पाउन सफल उपेन्द्र यादव पक्ष भने सरकारमा जाने तयारी स्वरुप मन्त्री छनोटमा सक्रिय बनको छ । तत्कालिन सत्तारूढ नेकपा एमालेमा विवाद बढिरहेका बेला केपी ओली […]
उपेन्द्र यादव भुलभुलैयामा परे : महन्थ ठाकुर
२३ साउन, जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता नपाएपछि महन्थ ठाकुर समूहका नेताहरू मधेश झरेका छन् । ठाकुरसहित नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारीसहितका नेताहरुले शनिबार जनकपुरधाममा धनुषा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला गरेका छन् । कार्यकर्ता भेलामा नेताहरुले उपेन्द्र यादवले पार्टी एकता भत्काएर मधेशी नेताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन् । नेता महन्थ […]
उपेन्द्र यादवको माइन्युटमा महन्थ ठाकुर पक्षको नाम
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपनि महन्थ ठाकुर पक्षको कार्यकारिणीलाई के गर्ने भनि पार्टीमै अन्योल कायमै छ ।जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक हिजोदेखि जारी रहेपनि यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन । नेताहरुका अनुसार जारी बैठकको माइन्युटमा अझै महन्थ ठाकुर पक्षको नाम राखिएको छ । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार जसपा कार्यकारिणी समितिको माइन्युटमा ५१ जना सदस्यको नाम नै उल्लेख रहेको हो। तर उनीहरुलाई बैठकमा भने बोलाइएको थिएन । आधिकारिकताका लागि उपेन्द्र यादवको पक्ष
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारितासम्बन्धी विवादको फैसला उपेन्द्र यादवको पक्षमा सुनाएको छ । सोमबार निर्वाचन आयोगमा जसपाको उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षमा सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर सनाखत गराउँदा उपेन्द्र यादवको पक्षमा बहुमत देखिएसँगै यादव पक्षलाई नै आधिकारिता दिएको हो । जसपाका ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ३४ जनाले उपेन्द्र यादव पक्षमा रहेको भनी हस्ताक्षर […]
Prashasan आषाढ २०७८
महन्थ ठाकुर पक्षले छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने
११ साउन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई छुट्टै दल दर्ता गर्न दिने भएको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका ३४ जनाले हस्ताक्षर गरेपछि जसपाको आधिकारिकता यादव पक्षले पाएको छ । र १६ जनाले हस्ताक्षर गरेको महन्थ ठाकुर पक्षलाई अर्को छुट्टै दल गठन गर्न दिने […]
महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव आ–आफ्नै अडानमा, भोलि होला त सहमति ?
जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा देखिएको विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले भोलि महन्थ ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्षलाई बोलाएको छ । भोलि आयोगमा हुने छलफलले पार्टीमा सहमति गरेर एकीकृत भएर जाने अथवा अलग भएर जाने तय हुने बताइएको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिकताका लागि आयोगमा पत्र दर्ता गराएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पनि आफ्नो प्रमाण दिन आयोगले पत्र पठाएको थियो । जवाफमा ठाकुरले पार्टीमा आफ्नो पनि बहुमत रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाइसकेका छन् ।पार्टीमा दुवै पक्षले आ&ndas
स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय मान्य नहुने महन्थ ठाकुर भनाई
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर,उपेन्द्र यादव पक्षले गर्ने कुनै पनि निर्णय नमान्ने बताएका छन्। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट आइतबार ठाकुरले कुनै पनि निर्णय नमान्ने बताएका हुन। यादव पक्षका ३१ सदस्य सहभागी बैठकले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण […]
Prashasan बैशाख २०७८
महन्थ ठाकुर तटस्थ, उपेन्द्र यादव विपक्षमा
काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा पनि नभई तटस्थ रुपमा बस्ने बताएका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावका छलफलमा क्रममा उनले कुनै पनि प्रस्तावका पक्षमा मत नदिई तटस्थ बस्ने जानकारी गराए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कुरा सुनेर आफ्नो कार्यकर्ता कारागारमुक्त गरेकामा आभार […] The post महन्थ ठाकुर तटस्थ, उपेन्द्र यादव विपक्षमा appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
राजधानी दैनिक चैत्र २०७७